Hlola i-Kyoto, Japan - World Tourism Portal
Hlola iKyoto, Japan
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eKyoto, Japan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseKyoto
Bukela ividiyo ngeKyoto
UKyoto wayedolobha elikhulu Japan isikhathi esingaphezu kwenkulungwane, futhi inedumela njengedolobha elihle kakhulu nedolobha lesiko lesizwe. Kodwa-ke, izivakashi zingamangala ukuthi kungakanani umsebenzi abazowenza ukubona uhlangothi oluhle lukaKyoto. Okuvelayo okokuqala ngqa kwedolobha kuzoba ngundabamlonyeni wasenkabeni yeKyoto, ezungeze isiteshi sesitimela sengilazi nensimbi yangempela, okuyisibonelo sedolobha eligxiliwe kusiko elingqubuzana nezwe lanamuhla.
Noma kunjalo, lapho uzimisele ukuhlola iKyoto, isivakashi esiphikelelayo maduze sizothola ubuhle obufihliwe bukaKyoto emathempelini nasemapaki aphakathi enkabeni yedolobha, bese sithola ukuthi idolobha linokuningi esingakuhlinzeka ukwedlula ukuthi lihlangane ngaso leso sikhathi.
Njengoba yayakhiwe phakathi kwezintaba zaseNtshonalanga Honshu, iKyoto yayiyinhloko-dolobha yaseJapan nokuhlala kuyo i-Emperor ukusuka e-794 kuze kufike ekubuyiselweni kweMeiji kwe1868, lapho inhlokodolobha yathuthelwa Tokyo. Ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane enkabeni yamandla amaJapan, isiko, isiko nenkolo, yaqokelela iqoqo elingalinganiwe lemizi yamakhosi, amathempeli nezindawo eziphakemeyo, ezakhelwe ababusi, amasekela, nezindela. UKyoto wayephakathi kwamadolobha ambalwa aseJapan aphunyuka ekuqhumeni ngamabhomu kweMpi Yezwe II futhi ngenxa yalokho, iKyoto isenenqwaba yezakhiwo zangaphambi kwempi, njengasemalokishini endabuko abizwa ngokuthi machiya. Kodwa-ke, idolobha liyaqhubeka nokwenza izinguquko zesimanje nezinye izakhiwo zendabuko zaseKyoto zithathelwa indawo ukwakhiwa okusha, njengesakhiwo saseKyoto Station.
IKyoto ayinaso isikhumulo sezindiza sayo, kodwa kunalokho ihanjiswa yi Osakayizikhumulo zezindiza ezimbili. Kunomgwaqo omuhle kakhulu nenethiwekhi yesitimela phakathi kwamadolobha amabili.
Abahambi baphesheya kwezilwandle bangandiza eKansai International Airport bese bethola isitimela esiya eKyoto.
Kunokukhethwa okuhle kwezitolo ezingokwesiko ezingagunyaziwe ezungeze isiteshi sase-Arashiyama eNtshonalanga Kyoto, ukuthengisa abalandeli namaswidi wendabuko. Izitolo ezithe xaxa zingatholakala eGion kanye nendlela eya eThempelini laseKiyomizu, kuthengiswa okhiye bamatshe, amathoyizi acijile nezinto zokuhlobisa. Ezinye izinto eziyisikhumbuzo zendabuko ezivela eKyoto zifaka amapharaseli nodoli olubaziwe ngokhuni.
Izikhumbuzo ezingahambelani kepha ezimibalabala (futhi ezingabizi kakhulu) zingamatafula okuvota okhiqizwe yindawo yamaShinto, aqukethe isithombe esiphathelene nethempeli elingemuva. Izivakashi zibhala imikhuleko yazo ezibhebheni bese zibaxhoma, kepha akukho mthetho othi awukwazi ukuthatha nawe.
Abathandi bemidlalo kaManga kanye ne-anime kufanele bavakashele iTeramachi Street, umgwaqo wokuthenga osemboze umgwaqo omkhulu weShijo-dori, ogcoba isitolo esikhulu sama-manga ezitezi ezimbili, kanye negatsha elinezitezi ezimbili leGamers (uchungechunge lwezitolo ze-anime), kanye isitolo esincane se-anime esinezitezi ezimbili nesitolo sokuqoqa.
Ama-ATM amaningi eKyoto awavumeli ukuthi kusetshenziswe amakhadi wesikweletu angewona awekhaya, kepha ama-ATM aseposini kanye neSeven-Eleven ngokuvamile enza. Ngakho-ke uma uthola ikhadi lakho linqatshiwe noma lingasebenzi kwi-ATM bese uzama ukungena eposini (yuubinkyoku noma i-JP (ngezinhlamvu zama-orange) ukusebenzisa ama-ATM abo esikhundleni. Funa ama-logo we-PLUS noma we-Cirrus, noma ngabe yikuphi okutholayo kuprintiwe emuva ekhadini lakho le-ATM. Enye inketho yiCitibank, okufanele isebenze, nayo. Kukhona i-ATM yakudala yokulinda ebangeni elingaphezulu kwesitolo soMnyango weTakashimaya eShijo / Kawaramachi endaweni eyi- “Cash Corner.” Ibhange lama-ATM elingaphansi kwesikhungo sezitolo i-Kyoto Tower (ngaphesheya komgwaqo osuka eJR Kyoto Station) nawo afaka umshini munye lapho kungasetshenziswa khona amakhadi aphesheya.
Uma usanda kwehla esitimeleni futhi into yokuqala engqondweni yakho ukuluma ukudla, kunezindawo zokudlela eziningana ezitezi eziyishumi nanye nanye zesitolo somnyango wase-Isetan ezinamathele esiteshini saseKyoto. Iningi leminikelo liJapan, kufaka phakathi nedolobhana laseRamen eliqinisekile, kanye nezindawo zokudlela ezinhle zase-Italiya ezimbalwa.
IKyoto, nedolobha eliseduze lase-Uji, yaziwa kakhulu ngalo matcha(i-maccha) noma itiye eliluhlaza, kepha izivakashi azihambi nje Uphuze itiye; kunezindlela ezahlukahlukene zokuphathwa okunambitheka kwe-matcha. I-Matcha ice cream ithandwa ikakhulukazi, futhi izindawo eziningi ezithengisa u-ayisikhilimu zizoba nayo njengenketho. Kubonakala futhi ezinhlobonhlobo zokudla okulula kanye nezipho.
Kunesitolo esisodwa eKyoto esibizwa nge- “Maccha House” okufanele usiye ngempela. Lesi isitolo esigxile eMatcha. Ngakho-ke abantu bangakujabulela ukudla noma ukuphuza iziphuzo zoqobo zeMatcha namaswidi ongazidla kuphela lapha eJapan. Okumnandi kakhulu kulesi sitolo iMatcha tiramisu, eyenziwe ngoMatcha nohlobo lweshizi olubizwa ngokuthi i-mascarpone. Akunambitha okumnandi kangako, ngakho-ke lobu bumnandi bunconywa futhi kubantu abangazithandi izinto ezimnandi kakhulu. Kepha hhayi ukunambitheka kuphela, kepha futhi ukubukeka kubukeka kakhulu
I-Yatsuhashi ingenye isidlo esimnandi saseKyoto. Kunezinhlobo ezimbili zatsuhashi; kubhakwe nokuluhlaza. I-yatsuhashi enzima ekuqaleni yenziwa kusetshenziswa isinamoni, futhi inambitheka njengebhisikidi elikhakhayini. Namuhla, ngenkathi amabhisikidi ahlala efana, ungathenga futhi i-yatsuhashi elicwilisiwe macha nama-glazes ane-flavour-sitrobheli.
Osahlaza yatsuhashi, owaziwa nangokuthi hijiri yenziwa nesinamoni, kepha isinamoni ixutshaniswa nokunameka ubhontshisi bese iphonswa ku hijiri ukwenza unxantathu. Namuhla, ungathenga ukunambitheka okuhlukahlukene, kufaka phakathi macha, ushokoledi nobhanana, kanye no-poppyseed omnyama. Izinhlobo eziningi zokunambitheka zingezikhathi ezithile zonyaka, ezinjenge sakura (Ama-cherry aqhakaza) i-yatsuhashi etholakala entwasahlobo kanye nemango, peach, aluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-sitrobheli, etholakala ngoMeyi kuya ku-Okthoba.
Noma i-yatsuhashi ingathengwa ezitolo ezinkulu zezikhumbuzo, indawo enhle yokuthenga yatsuhashi eluhlaza yindawo edumile yaseHonkenishio Yatsuhashi. Ngenkathi ezinye izitolo zingahle zithwale i-yatsuhashi, lena indawo yokuthola konke ukunambitheka kwesizini, kanye namasampula amahhala. Iningi lalezi zitolo zitholakala eHigashiyama. Elungele izivakashi kakhulu mhlawumbe yilelo eliseKiyomizu-Zaka, ngezansi nje komnyango weKiyomizu-dera.
Ngenkathi izivakashi eziningi zithola i-yatsuhashi eluhlaza njengesipho esimnandi (futhi esingabizi kakhulu), qaphela ukuthi kuthatha isonto elilodwa kuphela ngemuva kokuthenga. I-bakats yatsuhashi ngakolunye uhlangothi, izohlala izinyanga ezintathu. Cabanga ngalokhu lapho unquma ukuthi iziphi izipho okufanele uhambe nazo ekhaya.
IMont Blanc aux Marrons (ikhekhe le-Chestnut)
Lesi ngesinye soshukela odumile ongawudla eKyoto, kuleya cafe ebizwa nge- “Sweets Cafe Kyoto Keizo”. Into ekhethekile ngale khekhe ukuthi yenziwa ngokubhaka ama-meringue ngamazinga okushisa aphansi. Ngakho-ke, ngokungafani namanye amakhekhe, leli khekhe le-chestnut kuthiwa ligcina kuphela imizuzu ye-10. Lokhu kungenxa yokuthi ngemuva kwemizuzu ye-10, ukuthungwa nokunambitheka kwale khekhe kuguquka kakhulu. Ukuthungwa nokunambitheka kwale khekhe kushintsha kakhulu kangangokuba abanye abantu bacabanga ukuthi badla ikhekhe elihluke ngokuphelele ngemuva kokuba sekudlule imizuzu eyi-10.
Okunye ukukhethekile kweKyoto kufaka phakathi i-hamo (inhlanzi emhlophe ekhonzwa nge-ume njengo-sushi), i-tofu (zama izindawo ezungeze ithempeli laseNanzenji), i-suppon (isidlo se turtle esimba eqolo), izitsha zemifino (ngenxa yobuningi bamathempeli), ne-kaiseki-ryori (eningi Ukukhetha kwe-chef checourse okungaba kuhle kakhulu futhi kubize kakhulu).
Indawo yasebusuku yaseKyoto iphethwe yimigoqo enakekela izidingo zendawo, iningi lazo lisedolobheni eliKhulu phakathi naseKiyamachi, phakathi kweShijo neSanjo. Le ndawo inikeza izinhlobo ezahlukene zokuphuza kuzo zonke izinhlobo zabantu. Ngeke futhi ube nenkinga yokuthola imigoqo yokubamba kanye neyokubamba izivakashi, ngemenenja yabasebenzi bephokophele bezama ukujabulisa izivakashi. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo ngale komgwaqo kwezinye izifunda, kodwa ngenxa yokugcotshwa okukhulu kwemigoqo endaweni efanayo, kulula ukuthola indawo lapho uzizwa usekhaya kakhulu ukuthi uphumule ubusuku.
Uma ufuna ama-nightclub, iKyoto inezinketho ezimbalwa, kepha akulona idolobha elaziwa ngamakilabhu alo omdanso achumayo. Labo abanethemba lokuzwa ukuthi le ngxenye yobusuku baseJapan kufanele bacabangele ukuthatha isitimela baye Osaka lapho amakilabhu amaningi e-hip futhi endle ngokwanele ukuba angakwazi ukushayisana nanoma iyiphi iklabhu yaseTokyo.
Ezinye zezinto ezaziwa kakhulu nguKyoto zivela eGekkeikan Brewery endaweni yaseFushimi eSouthern Kyoto. Inkampani yonyaka wangaphansi ye-400 esakhiqiza kakhulu, iGekkeikan inikeza izinkambo zezindawo zayo.